मिडिया संग अती नै नजिक रहन्छन् उज्जल धमला “बिबस” – Saitim Khabar
२ असार २०७८, बुधबार १३:११
उज्जल धमला (बिबस) काठमाडौ । ठुला पर्दाको फिल्म होस् ,वा म्युजिक भिडियो, देखी रेडियो,पत्रीका, अनलाइन मिडिया सबैमा चासो राख्छन् , सिर्जनात्मक लेख रचनालाई बढी प्रयोगमा ल्याउन चाहान्छन् उनी र बढी समय दिन्छन् ,!
आफुले लेखेको केही लेखबाट प्रभावित भएर राष्ट्रिय गायक,गायिकाहरुले स्टेज प्रोग्राम सम्म निम्ता नै गरेको मा उनी खु: सी ब्यक्त गर्छन् ,हजारौं को भिडमा आफुलाई स्टेज सम्म बोलाएर कलाकारहरुले अँगालो हाल्दा यहाँ भन्दा बढी आनन्द अन्त कता मिल्ला र खै ? प्रश्न गर्छन् ? पछिल्लो २ बर्षमा पचास भन्दा बढी आर्टिकल आफुले लेखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ,!
दलित,जिन्दगी,राजधानिमा कोठा खोज्दाको त्यो दिन,के म दलितको छोरा तिमी बाहुनकी छोरी तिमी र मेरो बिबाह हुदैन र ? भन्ने लेखले आफुले धेरै नै माया,र हौसला पाएको उहाँ बताउनुहुन्छ,!
र आगामी दिनहरुमा रेकर्डिङ गरेर नै केही बिषयबस्तु ल्याउने उहाँको दाबी छ,!
उहाँ नेपाली राजनीतिक बिषयलाई पनी ज्यादा महत्त्व का साथ हेर्नुहुन्छ, तिनै नेपाली राजनीतिक बिषयप्रती केन्द्रीत ब्यङ्ग्यात्मक हरफहरु जस्ताको तस्तै,!
तिमीलाई सपथ चाहीएको होला,
मलाई शैंया चाहीएको छ!
तिमीलाई दौरा, सुरुवाल चाहीएको होला,
मलाई कात्रो चाहीएको छ!
तिमीलाई झन्डावाल गाडी चाहीएको होला,
मलाई शब/ बाहन चाहीएको छ!
तिमीलाई बधाई चाहीएको होला,
मलाई श्रर्दान्जली चाहिएको छ!
तिमी सत्ता नपाएर दुखी हौंला,
म बेड नपाएर दु: खी छु!
तिमी सांसद किन्न नपाएर दु:खी होला,
म अक्सिजन किन्न नपाएर दु:खी छु!
तिमी अर्को चुनाबमा पैसा जम्मा गर्न नपाएर दु:खी हौंला,
म मेरो सन्तानबारे दुई छाकबारे सोचेर दु:खी छु!
तिम्रो आबश्यकता र दु:ख केही पछी पनी पूरा गर्न सकिएला,
मलाई त केही सेकेन्ड वार/ पारको पनी सवाल छ!
तिम्रो लागी म फगत अंक हुन सकुँला,
म प्रती आश्रीत र मेरो प्रियजनको लागी मेरो आबश्यकता बाँकी छ!
कृपया मेरो लागी भएतापनी तिमी आफ्नो अन्धो स्वार्थबाट बाहिर आऊ,
मेरो जीवन बचाउ!मेरो भोट पाउ,
अनी आफ्नो सत्ता पाउ र बचाऊ!
डम्बर थामी ‘अनुपम’ का
“तिमीलाई बधाई चाहिएको होला
कविता : “छ्योर्तेन” शान्तिको